FCP X: Curi "Ken Burns Saamaynta"
The "Ken Burns saamayn" waxaa loo sameeyey ee caanka ahaa ee filim documentary Ken Burns keenay definta nolosha la isticmaalayo digsiyo iyo zooms. Final Cut Pro X qaaday oo arrinkan khuseeya oo waxay ku software dhisay. (Dhamaadka qoraalkan, waxaad arki doonaa update ah oo daboolaya feature cusub Apple ku daray in 10.1 sii daayo.)
Waxa jira laba siyaabood oo loo abuuro saamayn this:
1: Isticmaalka cajaladda "saamayn Ken Burns" qalab
2: Isticmaalka keyframes
Faa'iidada ay u qalab iswada waa in ay si degdeg ah oo sahlan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay had iyo jeer isticmaalaa dhamaan mudada clip ah. Faa'iidada si keyframes waa in aad nooleyn karo clip dhamaystiran, ama kaliya qayb ka mid ah clip ah. Si kastaba ha ahaatee, keyframes waa xoogaa adag tahay in la isticmaalo.
Maqaalkani waxa uu muujinayaa labadaba farsamooyinka.
Samee dhaqdhaqaaq la isticmaalayo saamaynta "Ken Burns"
Si aad u codsato hawlgeli Ken Burns in image ama video clip ah weli, dooro clip ee Jadwalka ka. (Kani waa sawirka waxaan soo qaaday Malahide Castle duleedka Dublin, Ireland, markii aan dhowaan booqday on seminar safar.)
Riix icon dalagga ee geeska hoose ee bidixda ah daawadayaasha ....
Markaas, riix saamayn Ken Burns in bar oo ugu sarreeya.
Laba laydiga waxaa lagu soo bandhigaa. Afargees cagaaran muujinaysaa image soo bandhigay bilowgii clip ah. Laydi guduudan wuxuu muujinayaa image soo bandhigay dhamaadka clip ah.
FIIRSO: The saamayn Ken Burns had iyo jeer ku egyahay mudada oo dhan clip ah. Haddii aad rabto in ay kaliya u tartamo qayb ka mid ah clip ah, gooyay clip la sakiinta ah.
Riix gudaha afargees cagaaran, laakiin UMA laydi cas, taas oo doorteen afargees cagaaran - Tani waxay mitaal soo billowday ugu. Jiid labada geesood oo afargees cagaaran in size image-upka kooxda. Xaaladdan oo kale, waxaan xulashada shot ballaaran ee qaybta hoose ee saxda ah ee ku yiilleen.
Markaas, guji gudaha laydi cas si ay u doortaan iyo size oo jiidi ilaa aad ka hesho image ku dhamaaday aad rabto. Xaaladdan oo kale, waxaan zooming galay suuqa kala sare ee munaarad ka, si loo muujiyo meesha amiirad cadaalad lagu hayo ay maxaabiis ahaan ... iyo sidoo kale, waxaan u maleynayaa in aad ogtahay in sheekada.
Arrow cad muujinaysaa jihada dhaqdhaqaaqa.
FIIRO GAAR AH: Ka fogow zooming image ah mid aad u weyn ku yiilleen. Tan iyo video had iyo jeer ka hadlaya images bitmapped, zooming meel aad u fog si fudud u abuuraa pixels baruurta - taas oo muuqdaa qof fool xun. Halkan maqaal ku saabsan xigtaa ay weli images u video.
Press furaha arrow kor u dhaqaaqo bilowgii clip iyo saxaafadda Play ah.
Clip ayaa si habsami leh zooms ka bilaabo in uu booska dhamaatay. (Dhab ahaantii, ee u dhaqaaqdo smoothest, waxaad u baahan tahay in ay sugto clip ah la moodo. Si kastaba ha ahaatee, xitaa ka hor inta haya'ad dhamaato, waxaad si fiican fikrad waxa u dhaqaaqo eegi doonaa sida adigoo riixaya Play ka heli kartaa.)
Taasi waa. Fudud oo degdeg badan. Oo waxaan sameeyey.
Waxaa jira doorasho cusub in Apple ku daray la update 10.1 in ay Final Cut Pro X, waxaan hadda awood u leeyihiin in la beddelo xawaaraha iyo deceleration ee bilowgii iyo dhammaadka oo ka mid ah saamayn Ken Burns.
Goob default uu ahaan jiray in saamaynta bilaabi lahaa oo la joojiyo si tartiib tartiib ah, laakiin dardar dhexe. Hadda, marka aan xaq-click (Control-click) gudaha daawadayaasha on clip ee la doortay, afar doorasho muuqato;
Xasilloonaan iyo Out: dedejisaa bilowga iyo decelerates dhamaadka saamaynta.
Fududee In: decelerates dhamaadka saamaynta.
Fududee Out: dedejisaa bilowga saamaynta.
Quman: haysaa xawaare la mid ah oo dhan saamaynta.
Samee dhaqdhaqaaq la isticmaalayo keyframes
Dhibaatada kaliya oo habkani leeyahay waa in had iyo jeer isticmaalaa dhamaan mudada clip iyo, haddii aad rabto in aad waxa u badalo xawaaraha ama hakinta dhexe ee ku biiro, ma ahan. Wixii heerkaas ee kakanaanta, waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan keyframes.
QEEXID: keyframe A abuuraa isbedel lagu jiro loo maqli karo. Bulshada dhimaya kasta oo FCP X la keyframed karo. Oo waa inaad mar walba isticmaal keyframes Wehel - upka ah iyo keyframe soo gabagabeeyay.
Markii gacanta xigtaa iyo sanamyadii boos, dooro clip ah, u tag Isbatooraha ah (Command + 4), iyo set ollogga U hogaansanaato ma jiro. Tan waxay ku tusaysaa image ee ay xal buuxa, iyada oo aan siiyay. (Halkan maqaal ay uga faalooneysay astaanta hogaansanaato.)
Meelee aad playhead in clip meesha aad rabto in aad ku biiro kooxda ay u bilaabaan iyo in la hubiyo clip ayaa weli la soo xulay. Markaas, qabsato ka bedelaan goobaha in Isbatooraha ilaa aad leedahay meel laga bilaabo image ah. (Tusaalahaan, waxaan doonayaa inaan u dhaqaaqo inuu ku soo bilowdo ka mid labaad ee, qaaddey image si ay 65%, iyo dhaqaaqay image kor u 39 pixels.)
Maxaa yeelay, waxaan u baahan nahay si ay ula qabsadaan baaxadda iyo xilalkaasi dhaqaaqo, waxaan u baahan doonaa si ay u dejiyaan bilaabo iyo soo afjaridda keyframe ah. Keyframes ayaa qarka u saaran u dhimaya kasta oo aad rabto in aad beddesho - in aannu kiiska, in macnaheedu waa Miisaanka (size) iyo Sida Wacan.
Riix diamond ka cirro leh calaamada lagu daray ah si ay u dejiyaan jir ah oo muhiim u ah Jago iyo Miisaanka labada (laba keyframes wadar ahaan).
Next, guuraan playhead meesha aad rabto in aad ku dhaqaaqa in la joojiyo. Dheellitir Miisaanka iyo Mowqifka labada ilaa aad ka hesho go'an booska finalka. Maxaa yeelay, aad horay u abuuray keyframes u goobaha kuwaas, Final Goo si toos ah Qori afjaridda keyframes.
Si kale haddii loo dhigo, kaliya aad u baahan tahay in la abuuro keyframes bilaabo. Ka dib markii in, FCP abuurtaa dhammaan keyframes kale kuwa beegyada uu si toos ah.
Play aad clip iyo daawadaan sida dhaqaaqo bilaabo dhexe ee clip iyo ka hor dhamaadka dhamaado.
Hadda, waxyaabo aad u hesho xiiso leh.
Guji ka bedelaan icon ee geeska hoose ee bidixda ah daawadayaasha oo soo bandhigay waddada Motion casaan, oo muujinaya dhaqdhaqaaqa aad image.
Midhadh giraanta cad (oo ka wakiil xarunta ah ee image) oo jiidayo. Fiiro u yeelo in jidka mooshinka jirsado galay qalooca ah!
Riix keyframe cusub booska idin abuuray oo keliya iyo laba gooladaha Beziér waxaa lagu soo bandhigaa.
Midhadh mid ka mid ah gacanta oo ku jiidi in la beddelo xagal ee xariiqa qallooca. Samee riixo dheer ay wiiqaan qalooca, ka dhigi xamili gaaban soo afaysto qalooca.
Xaq-riix keyframe kasta oo ay u kala bedesho toosan (toosan-line) oo siman (gooladaha). Waxaad kaloo isticmaali kartaa menu pop-up si ay u tirtirto, qufulka, ama gab keyframes.
Waxyeelada Ken Burns waa si degdeg ah, oo ka dhigaysa in lays fudud image. Si kastaba ha ahaatee, aad leedahay dabacsanaan ka badan oo ay gacanta ku adigoo isticmaalaya keyframes.
By default, hawlgeli Ken Burns si tartiib ah dedejisaa bilowga, dadajiyaa dhexe iyo hoos dhamaadka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad bedeli kartaa goob default in ay xaq u-magcaabo (Control-magcaabo) on image clip gudaha daawadayaasha:
Fududee-in / fududee Out waa dhaqan default
Fudayd-in caanuhu dhamaadka saamaynta
Fududee-baxay xawaare ilaa bilowgii saamaynta
Quman ka dhigan tahay xawaaraha saamaynta ay weli joogto ah oo dhan clip ah
Hadda, waxaad ikhtiyaar u leedahay.
Larry Urdun waa xubin ka mid ah Agaasimayaasha Guild of America, saarayaasha Guild of America iyo waxa uu ku qoran kun oo maqaalo iyo siddeed buugaagta video tafatirka. Booqo website-ka: www.larryjordan.biz .
# Talo soo jeedinta 1:
All-in-One Video ayeey Software u Billowga
• Hawlaha ayeey Great, In kor loo qaado & shakhsiyeeyo Your Videos File.
• Beddelaan kasta video inay qaab editable u tafatirka.
# Talo soo jeedinta 2:
Tani waa tutorial aasaasi ah oo ku saabsan Apple Final Cut Pro X, xirfad software video tafatirka. Si kastaba ha ahaatee, haddii video tafatirka waa cusub oo aad si, tixgelin Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac)) . Tani waa aalad awood laakiin si sahlan loo isticmaalo dadka isticmaala kaliya bilaabaya. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
7 talooyin pro cut final oo isticmaala youtube
> Resource > FCP > FCP X: Samee Burns Ken hawlgeli